‘भारतको होइन, नेपालको चिन्ता गर्नुस्’-NepalKanoon.com
‘भारतको होइन, नेपालको चिन्ता गर्नुस्’
रन्जीत रे, भारतीय राजदूत
तर तपाईंले भारतीय भागबाट नेपालतर्फको गाडीको प्रवाह किन रोकिरहनुभएको छ। केही गाडी आइरहेका छन् अनि केही छैनन् भनेपछि त्यो कसरी सुरक्षासंग जोडिएको विषय रहन्छ र? केही चालक सुरक्षित हुन्छन् र आउन सक्छन् अनि केहीचाहिं असुरक्षित हुन्छन् र आउन सक्दैनन् भनेर तपाईं कसरी भन्न सक्नुहुन्छ ?
झापा, भैरहवा, बाँके, कैलाली, कञ्चनपुर। त्यहाँ विरोध प्रदर्शन वा अवरोध छैनन्। तर त्यहाँबाट पनि आएका छैनन् ?
हो । तर त्यहाँबाट पनि विगतको तुलनामा २० देखि ३० वा अझ १० प्रतिशतमात्रै गाडी आएका छन् ?
रक्सौल बाहेकका अन्य नाका सञ्चालनमा रहेको अनि औषधिका गाडी अन्य नाकाबाट पठाइएको भनेर तपाईंले भन्दै गर्दा नेपाली दृष्टिकोणबाट यो एकदमै अनौठो लाग्छ। किनकि पत्रकारहरु त्यहाँ पुगेका छन्, उनीहरुले स्थानीय भारतीय अधिकारीहरुसंग कुराकानी गरेका छन्। उनीहरुका अनुसार भारतीय अधिकारीहरुले माथिको आदेश भन्ने गरेका छन् – ट्रक जान नदिन माथिको आदेश। बेला बेला केही ट्रक छाडिएका छन्। अब प्रश्न के उठ्छ भने यदि केही ट्रकका ड्राइभरलाई काठमाण्डौं आउन असुरक्षा छैन भने, अन्य ट्रक किन आउन सक्दैनन् ?
हामी त्यो राजनीतिक विषयमा पनि आउँला। तर हेर्नोस् न आलुको आपूर्ति सामान्य छ, गोलभेंडाको आपूर्ति सामान्य छ, ग्रेनाइट र टायलका आपूर्ति सामान्य छन्। तर इन्धनको आपूर्ति सामान्य छैन। नेपाली पक्षले बेहोरेको मूल समस्या त यो हो नि ?
एउटा राजदूत वा कूटनीतिज्ञको रुपमा तपाईंले त्यसको बचाउ गर्नुहोला। तर तपाईंकै देश भारतकै कतिपय पत्रकारहरुले वर्तमान भारतीय व्यवहारको आलोचना गरेका छन् ?
तर यथार्थ त यो हो नि– नेपाल पीडित भएको छ, मानिसहरुले इन्धन पाएका छैनन्, भूकम्प पीडितहरु जाडोमा लुगलुग कामिरहेका छन्, औषधिका अभावमा मान्छे मर्न थालिसके ?
अनि तपाईं भन्नुहुन्छ कि यो पीडाको कारण केवल तराईको आन्दोलन हो, भारत होइन ?
त्यसो भए विश्लेषकहरुले नेपाल भारत सम्बन्ध हालसम्मकै सबभन्दा चीसो तहमा पुगेको भनेर किन भनिरहेका छन् ?
त्यसो भए तपाईं भन्नोस् भारत के चाहन्छ? धेरै मानिसले यो प्रश्न उठाएका छन्?
साभार : बीबीसी नेपाली